एनएलजी इन्स्योरेन्सको १३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न - Arthakoartha.com
काठमाडौं, ८ असोज । एनएलजी इन्स्योरेन्सको १३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि तोकिएका प्रस्ताव पारित गर्दै साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो ।
उक्त सभामा एनएलजी इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष बिमल प्रसाद वाग्लेले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । सभामा आ.व. २०७५/७६ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र उसको पारीश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।
त्यस्तै आ.व. २०७४/७५ मा कम्पनीको कूल बीमा शुल्क आम्दानी १४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । उक्त आ.व.मा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कूल बीमा शुल्क आम्दानी गरेको छ भने आ.व. २०७३/७४ मा कम्पनीले एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कूल बीमा शूल्क आम्दानी गरेको थियो ।
एनआईसी एशिया बैंकमा क्यूआर मर्चेन्टहरु आबद्ध गराउँदा १० जनाले ५० हजार प्राप्त गर्न सक्ने